यी हुन् विश्वका सुन्दरी अपराधीहरु ! केटा बलात्कार देखि शव टुक्रा-टुक्रा बनाउने सम्म !
कार्तिक ०७, २०७५ Bigul Media | PS
एजेन्सी- अपराधीलाई देखेर मात्रै छिन्न सकिंदैन। कहिले काहिँ आफूले राम्रो सोचेको मानिस पनि अपराधी हुन सक्छ। अपराधी जति क्रुर हुन्छन्, त्यति सामान्य पनि देखिन सक्छन्। यस्तै विश्वभर सुन्दर अपराधीहरु पनि रहेका छन्। सुन्दर अनुहार भएका केहि खतरनाक महिला अपराधीहरुको बारेमा जान्नुहोस्।
बेलायतकी माइंडी सांघेलाको मुस्कान देख्दा जो कोहि पनि मदहोस हुन सक्छ। तर उनी आफ्नो प्रेमीको गर्भवती श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा कारागारमा छिन्। उनले आफ्नो प्रेमीको १७ वर्षीय श्रीमती सानाको विभत्स हत्या गरेकी थिइन्।
आफ्नो सुन्दर व्यक्तित्वको कारण चर्चित रहेकी स्टेफनी एक कुख्यात अपराधी रहेकी छिन्। उनी माथि अनगिन्ति अपराधका मुद्दा रहेका छन्। उनले गरेको ११४ अपराधको एकै पटक सुनुवाई भएको थियो।
अमेरिकाको टेक्सक्समा एक स्कुलमा अध्यापन गर्ने हायली धेरै सुन्दर देखिन्छिन्। तर उनले पटक-पटक नाबालिग विद्यार्थीहरुको बलात्कार गरेकी थिइन्। उनले दुई विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेको पुष्टि समेत भएको थियो।
इटलीकी स्थानीय वासिन्दा अमाण्डा नक्स आफ्नो घरमासँगै बस्ने साथीको हत्या गरेको आरोपमा जेल परेकी थिइन्। तर उचित प्रमाण जुट्न नसकेको कारण उनी थुनामुक्त भएकी थिइन्।
एस्टिबेलिज कैरेन्जालाई विश्वकै एक कुख्यात अपराधिको रुपमा लिने गरिन्छ। उनलाई आइस्क्रीम किलर पनि भन्ने गरिन्छ। उनले आफ्नो पति र प्रेमीलाई हत्या गरेर आइस्क्रीम फ्रिजमा लुकाएकी थिइन्।
बेलायतकी एम्बर हाइबरलिंग सुन्दरतामा धेरै नायिकालाई पनि पछि पार्न सक्छिन्। तर उनले आफ्नै पतिलाई २५ तला माथिबाट धकेलेर हत्या गरेकी थिइन्। उनले जेल भित्रै आत्महत्या गरेकी थिइन्।
प्रकाशित : बुधबार, कार्तिक ०७, २०७५१४:५३
घर वरिपरि यी रुखहरु राखे हुनेछ ठूलो अनिष्ठ ! आर्थिक संकटसंगै विभिन्न समस्याहरु सामना गर्नुपर्ला !